हवाई अमेरिका मा पालतू अनुकूल मैत्री आवास को लागी सबैभन्दा खराब राज्य
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई ताजा समाचार » हवाई अमेरिका मा पालतू अनुकूल मैत्री आवास को लागी सबैभन्दा खराब राज्य
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • संस्कृति • हवाई ताजा समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • जिम्मेवार • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
घरपालुवा जनावरहरु को अनुकूल गुणहरु को संख्या धेरै नाटकीय रूप बाट ठाउँ बाट फरक फरक हुन सक्छ, देश को केहि भागहरु धेरै अरु को तुलना मा पालतू मालिकहरु को लागी धेरै सुलभ बनाउन सक्छ।
घरपालुवा जनावर-मैत्री गुणहरु को संख्या नाटकीय रूप देखि राज्य देखि राज्य फरक हुन्छ।
इलिनोइस, मिसिसिपी र न्यूयोर्क सबैभन्दा पाल्तु जनावर मैत्री राज्यहरु हुन्।
हवाई, अलास्का र पश्चिम भर्जिनिया कम से कम पालतू-अनुकूल अमेरिकी राज्यहरु हुन्।
US% अमेरिकी परिवारहरु (लगभग million५ मिलियन परिवारहरु) को घरपालुवा जनावर छ, र ४३ मिलियन घरहरु भाडामा लिनेहरु कब्जामा छन्। त्यसोभए, के हुन्छ यदि तपाइँ तपाइँको प्यारो साथी संग स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ?
यो दिमाग मा, यात्रा विशेषज्ञहरु पत्ता लगाउन चाहन्थे कि कुन राज्यहरु, शहरहरु र शहरहरु घरहरु को भाडामा उपलब्ध पालतू जानवरहरु लाई स्वीकार गर्न को लागी सबैभन्दा ठूलो अनुपात छ।
शीर्ष पचास सबैभन्दा जनसंख्या मा हेर्दै US शहरहरु, विशेषज्ञहरु भाडामा उपलब्ध सम्पत्ती को अनुपात रेकर्ड छ कि घरपालुवा जनावरहरु लाई स्वीकार गर्दछ। थप रूपमा, हामीले प्रत्येक राज्य मा उपलब्ध भाडा को प्रतिशत पाएका छौं कि घरपालुवा जनावरहरु संग एक किरायेदार स्वीकार गर्दछ, घरपालुवा जनावर मालिकहरु को लागी बस्न को लागी देश मा सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरु खुलासा।
इलिनोइस घर मा घरपालुवा जनावर मालिकहरु जो भाडामा खोज्दै छन् को लागी देश मा सबै भन्दा राम्रो राज्य हो, ५ .59.87 ..XNUMX% घरपालुवा जनावरहरु लाई स्वीकार को साथ। तेसैले यदि तपाइँ एक घरपालुवा जनावर मालिक देश को एक नयाँ भाग मा सार्न खोज्दै हुनुहुन्छ, इलिनोइस तपाइँको लागी एक राम्रो शर्त हुन सक्छ!
घरपालुवा जनावरहरु संग भाडामा लिन को लागी दोस्रो सबैभन्दा राम्रो राज्य मिसिसिपी हो, ५२.२52.28% पालतू जनावर मालिकहरु को लागी उपलब्ध गराईन्छ। यो मिसिसिपी सबै दक्षिणी राज्यहरु को सबैभन्दा पाल्तु जनावर को अनुकूल बनाउँछ, र घरपालुवा जनावरहरु लाई बस्न को लागी एक महान ठाउँ।
न्यूयोर्क घरपालुवा जनावर मैत्री भाडामा को लागी देश मा तेस्रो सबै भन्दा राम्रो राज्य हो, सम्पत्ती को 47.89% भाडावालहरु लाई आफ्नो घरपालुवा जनावर ल्याउन को लागी अनुमति संग। यो उच्च प्रतिशत न्यूयोर्क तपाइँको घरपालुवा जनावरहरु संग बस्ने को लागी पूर्वी तट मा सबै भन्दा राम्रो राज्य बनाउँछ।
घरपालुवा जनावर मैत्री भाडा को लागी शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ राज्यहरु
श्रेणी राज्य घरपालुवा जनावर अनुकूल छ कुल अनुमति दिन्छ % घरपालुवा जनावर मैत्री
1 इलिनोइस 2468 4122 59.87%
2 मिसिसिपी 229 438 52.28%
3 न्यूयोर्क 6320 13196 47.89%
4 जर्जिया 1914 4072 47.00%
5 उत्तर कैरोलिना 1765 3917 45.06%
6 टेनेसी 895 2156 41.51%
7 इन्डियाना 804 2050 39.22%
8 नेवादा 494 1344 36.76%
9 अलबामा 494 1351 36.57%
10 मिसौरी 877 2506 35.00%